I-Cumbria - 1500ft ukuphakama eNorth Pennines AONB, - I-Airbnb
I-Cumbria - 1500ft ukuphakama eNorth Pennines AONB,
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguClare
Yinxalenye yovimba otshintshiweyo/ubisi oluqala malunga ne-1700, esi sihlomelo sebhedi esiyi-2 sinokwahlukaniswa nekhaya lethu ukuze iindwendwe zizisebenzise njengendawo yokuhlala. Iindonga zamatye, isitovu seenkuni. Indawo yasemaphandleni kwiNorth Pennines AONB emangalisayo, ehleli malunga ne-1500ft nangaphezulu kwidolophana yaseGarrigill. Ilungele i-Pennine Way i-South Tyne Trail kunye nomzila we-C2C. Uhambo olufutshane oluya eAshgill force nakwimizuzu eyi-20 xa uqhuba iHigh force neLow force.
Le ndlu inekhitshi elivulekileyo lokuceba/indawo yokutyela/indawo yokuphumla enesitovu seenkuni, igumbi lokuhlambela elineshawa yombane neradiyetha yeetawuli ezifudumeleyo, igumbi lokulala elinamagumbi amabini anamagumbi amabini, omabini aneeyunithi zesinki.
Le ndlu ineintanethi, iTV enesibhakabhaka, isixhobo sokudlala iDVD (ezinye iiDV ziyafumaneka), imidlalo yosapho, iithoyizi kunye nemidlalo yeendwendwe eziselula kunye neencwadi ezifumanekayo kwiindwendwe zethu.
Kukho indawo yokupaka imoto enye esendlini kunye nokusetyenziswa kwezinye zeendawo zethu ezingaphandle.
Nceda uqaphele ukuba sikwiikhilomitha eziyi-1500 ukusuka endleleni. Ungakwazi ukupaka ecaleni kwendlela ukuba uyathanda.
Isitulo esiphakamileyo, ikhothi yokuhamba kunye nebhafu yosana ziyafumaneka xa kucelwa.
Ukufudumeza indawo yokuxhoma iinkuni nezinto zokufudumeza ebusuku ezantsi, ioyile egcwalisa iiradiyetha zombane kumagumbi okulala neradiyetha yeetawuli kwigumbi lokuhlambela. Siza kukunika iilokhwe, ukutsha kunye nokucima umlilo ukuze uqalise. Iilogo ezongezelelweyo zingathengwa nge-5 kwibhegi nganye kwisicelo.
Asikho emanzini kwaye indawo isentwasahlobo. Ngamanye amaxesha sinamanzi acocekileyo, akhuseleke ngokupheleleyo njengoko ehluziwe kwaye i-UV iphathwe kule ndlu. Kodwa ke sinikezela ngamanzi asebhotileni ukuba uyathanda.
Kukho i-bbq yegesi enamavili amabini enokusetyenziswa ziindwendwe, kunye nemidlalo yangaphandle kunye ne-hamper yepikiniki (ipakethi zomkhenkce kwi-deep freezer).
Kukho igadi encinci yemifuno kwaye iindwendwe zikhululekile ukuzisika ukuze zizisebenzise ngexesha elikhulayo.
Idolophana yethu ekufutshane yiGarrigill ekumgama ongaphantsi kweemayile eziyi-2 kwaye inceda kwi-Post Office/ivenkile, kunye neGalari.
I-Alston ikude ngeemayile eziyi-5 kwaye ineevenkile ezintle, iivenkile zokutyela kunye neSouth Tynedale Rail -http://www.south-tyreonale-railway.org.uk.
I-Penrith ikumgama wemizuzu eyi-40 xa uhamba ngemoto kwaye iCarlisle ikude ngemizuzu eyi-45 ngemoto.
Imithambeka yeYad Moss ski ikude ngeemayile eziyi- - http://www.yadmoss.co.uk.
IMiddleton eseTeesdale yidolophu encinci ethandekayo kwaye ikude ngemizuzu eyi-25 ngemoto. Inqaba i-Barnard ikumgama wemizuzu eyi-40 xa uqhuba.
NgoNtwasahlobo ka-2018 uluntu lwaseBritani luye lwavota uhambo lwabo oluthandayo oluyi-100. Inombolo yokuhamba 34 - I-High force kunye ne-Low force yimizuzu eyi-20 kuphela ukusuka endlwini https://theoutdoorguide.co.uk/britains-favourite-walks/high-force-low-force-county-durham/
Ngaphambi kokuhlala kwakho, nceda uzive ukhululekile ukusebenzisa inkqubo yemiyalezo ye-Airbnb ukubuza nayiphi na imibuzo onokuba nayo. Ngexesha lokuhlala kwakho vele uze unkqonkqoze emnyango.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Garrigill